စက်မှုသတင်းစက်ရုံ - တရုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
microprocessor လူပျိုဆေးထိုးအပ်ပြုတ်ရည် Pump
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် SEJOY HEMOGLOBIN မီတာဝန်ဆောင်မှု
post အချိန်: 11-08-2019
ဟီမိုဂလိုဘင်ကိုတိုင်းတာခြင်းသည်သင်၏လူနာများ၏ကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်သူတို့၏ဘဝအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဟီမိုဂလိုဗင်အဆင့်လျော့နည်းခြင်းသည်လူနာများတွင်သံချို့တဲ့ခြင်းကဲ့သို့သောပြproblemsနာများစွာကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်မဆိုဟေမိုဂလိုဘင်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်လိုအပ်သောကြောင့် SEJOY h ...ဆက်ဖတ်ရန် »
သွေးတိုးရောဂါ - နို့၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဒိန်ချဉ်နှင့် tofu တို့သည်စာဖတ်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်
post အချိန်: 10-09-2019
ဗြိတိန်ရှိလူကြီးလေးယောက်တွင်တစ် ဦး သည်သွေးတိုးရောဂါအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းလူအများစုတွင်၎င်းတွင်ရှိကြောင်းမသိရှိကြသောကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာများသည်အမြဲတမ်းသိသာထင်ရှားသော (သို့) ထင်ရှားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်မှုရှိမရှိသိရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏မိသားစုဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဒေသခံဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ်သင်ဖတ်ရှုခြင်းကိုပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း - Beetroot ဖျော်ရည်ကသင်၏စာဖတ်နှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်
post အချိန်: 09-29-2019
ဗြိတိန်ရှိအရွယ်ရောက်သူလေးယောက်တွင်တစ်ယောက်သည်သွေးတိုးရောဂါကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ သို့သော်အခြေအနေရှိသူများစွာသည်၎င်းတွင်ရှိသည်ဟုမသိကြပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောဂါလက္ခဏာတွေကသိသာခဲတယ်။ သင်၏သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားမှုရှိမရှိကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏မိသားစုဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဒေသခံဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူမှသင်၏စာဖတ်ခြင်းကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: 09-11-2019
A lot of friends ask doctor, why does the doctor of the hospital like to use electronic sphygmomanometer, but chargeapatient to go home with electronic sphygmomanometer? In fact, this is our misunderstanding, there is no such rule, the current electronic sphygmomanometer and mercury sph...ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: 10-31-2017
လူကြီးများအတွက် devices တွေကိုတိုင်းတာသွေးဖိအားများက validation များအတွက်နိုင်ငံတကာပရိုတိုကော 20101. အတွက်သွေးတိုး၏ဥရောပလူ့အဖွဲ့အစည်းများကပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော protocol ကိုအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့အရေအတွက်က device ကိုတိကျမှန်ကန်မှုကိုခေတ်မီနည်းပညာများ, နှင့် passin နှင့်အတူတိုးတက်မူကြောင်းကိုဝန်ခံ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
post အချိန်: 10-05-2016
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Food and Drug Administration (FDA) သည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းမှတစ်ဆင့်ထုတ်ကုန်များကိုလုံလောက်စွာခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည့်ထူးခြားသည့်စက်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုတည်ထောင်သည့်နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းသည်စက်ပစ္စည်းတံဆိပ်များနှင့်စက်ပစ္စည်းအမှတ်အသားများတွင်ထူးခြားသောစက်ပစ္စည်းအမှတ်အသား (UDI) ထည့်သွင်းရန်စက်တံဆိပ်ကပ်ရန်လိုအပ်သည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
ထူးခြားသည့်စက်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း - UDI
post အချိန်: 12-28-2015
FDA သည်ဆေးဝါးပစ္စည်းများကို၎င်းတို့၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းတို့ဖြင့်လုံလောက်စွာခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်ထူးခြားသောစက်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုတည်ဆောက်သည်။ အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ပြီးသောအခါ၊ စက်ပစ္စည်းအများစု၏တံဆိပ်တွင်လူနှင့်စက်မှဖတ်နိုင်သောပုံစံဖြင့်ထူးခြားသောစက်ပစ္စည်းအမှတ်အသား (UDI) ပါဝင်လိမ့်မည်။ ကိရိယာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းများကိုလည်းေကာင်းရမည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
နေရပ်လိပ်စာ: အဆောက်အဦး 2, No.202, Zhenzhong လမ်း, အနောက်ရေကန်စီးပွားရေး & ။ နည်းပညာဇုန်, 310030 ဟန်ကျိုး, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-571-81957767 EXT.812